Extrait hoditra voaloboka - J&S Botanics
[Anarana Latina] Vitis vinifera L. [Loharanon-tanety] avy any Chine [Fampahafantarana] Proanthocyanidins polyphenol [Fisehoan-doko] Vovoka mena miloko mena antitra Fambolena ampiasaina: hoditra 10PPM [Pesticide residue] EC396-2005, USP 34, EP 8.0, FDA [fiainana fonenana] 24 Volana [Package] Nofidiana tao anaty amponga taratasy sy kitapo roa plastika ao anatiny. [Lanjan'ny Net] 25kgs / amponga Function 1.Grape hoditra fitrandrahana ampiasaina hampihenana ny risika homamiadana; 2.Aratra vita amin'ny hoditra no mampiasa ny antioxidan ...
[Anarana latina] Vitis vinifera L.
[Plant Source] avy any Sina
[Spesy] Proanthocyanidins polyphenol
[Fomba fitehirizana] Vovoka mena mena
Zavamaniry ampiasaina: hoditra
1.Grape hoditra fitrandrahana ampiasaina hampihenana ny risika homamiadana;
2.Aratra vita amin'ny hoditra dia ny fampiasana ny hetsika antioksidan;
3.Antoka amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra dia manana anti-inflammatory, esory ny lela;
4.Mamitrika ny hoditra vita amin'ny hoditra dia mety hampihena ny lozam-pifamoivoizana sy ny katarakta;
5.Grape fanesorana ny hoditra dia hampihena ny famenon-tsiran'afo amin'ny valan-ketra amin'ny fanatanjahan-tena;
6.Grape fanesorana hoditra dia hanatanjaka ny lalan-dra ny fahafaha-mavesatra ny rindrina.
1.Ny fanesorana ny hoditra dia azo atao anaty kapoaka, troche ary granita ho sakafo mahasalama;
2.Haroan'ny mason-tsolika vita amin'ny voaloham-boaloboka dia nampidirina be tamin'ny zava-pisotro sy ny divay, ny makiazy toy ny votoaty fampiasa;
3. Ny mason-koditra voaloboka dia ampiana be dia be amin'ny karazan-tsakafo rehetra toy ny mofomamy, fromazy ho toy ny fikolokoloana, antiseptika voajanahary any Eropa sy Etazonia, ary nampitombo ny fiarovana ny sakafo izany.
Inona no atao hoe katsizy hoditra?
Grape skin extract are industrial derivatives from whole grape seeds that have a great concentration of vitamin E, flavonoids, linoleic acid, and OPC . Typically, the commercial opportunity of extracting grape seed extract constituents has been for chemicals known as polyphenols, including oligomeric proanthocyanidins recognized as antioxidants.
Manankarena ao amin'ny Oligomers Procyanidin Complexes (OPC) ny nosy hoditra, izay antioxidant mahery. Ho fanampin'ny fanjanahan-karena be mpanankarena mihoatra ny 20 heny noho ny vitamina C. Ny sisan-tsokosoko amin'ny voaloham-boaloboka koa dia avo 50 heny tsara kokoa noho ny Vitamin E. Ny voaloham-boaloboka dia manampy amin'ny fanamafisana ny hery fanefitra, ary koa mihena ny fizotran'ny fahanterana, izay avo be lanjan'ny tsena. Ny Procyanidin B2, izay fiompiana mavitrika indrindra amin'ny fanaovana neutralize radical maimaim-poana izay mahatonga ny fahanterana, ihany no misy ao anaty voan-tsolika.
Tany Eropa, ny OPC avy amin'ny proanthocyanidins nalaina am-boaloboka dia natsangana ary nampiasaina am-polony taona maro ho toy ny saro-bidy azo antoka sy mahomby. Ny fangaro vita amin'ny hoditra dia tsy misy firaketana misy poizina maloto na mitaiza, tsy misy fihetseham-po manimba na dia eo aza ny fatra lehibe. Noho ireo antony ireo, proanthocyanidins katsentsitra hoditra dia lasa kintana vaovao eo amin'ny tsenan'ny sakafo famatsiana.
Previous: Sakana voaloto-boaloboka
Next: Ruby ranom-boaloboka maintso